Hex Head Wood Screws Mpanamboatra sy mpamatsy - Factory China - Cixi Wenap International Trading Co., Ltd
Home > Products > Fiarovan-tena sy fanakam-basy > Fananganana fananganana fanorenana > Hex Head Wood Screws
Product Introduction of the Hex Head Wood Screws
Ny bozaka vita amin'ny hazo, vita amin'ny varahina, varahina, vy, na vy tsy misy rongony, dia ampiasaina hamokarana hazo. Afaka manana fofona tsotra na loko toy ny zina izy ireo, ary mety ho rotsak'orana sy afokasoka. Ny bozaka vita amin'ny hazo dia afaka manana flat, round, hex, oval, or head head, ary Phillips, slotted, Phillips square, na Torx drive. Matetika izy ireo no manondro tip. Matetika no mitebiteby eo amin'ny lohany, mipetraka amin'ny bozaka ny bozaka. Izy ireo dia tonga amin'ny loko isan-karazany (kofehy amin'ny metimety na metatra tady) sy ny lavany amin'ny fefy, ary azo ampiasaina amin'ny mpanisa.
Product Parameter amin'ny Hex Head Head Screws
DIN, ANSI, ASTM, JIS, BSW ary tsy marim-pototra
Kofehy vita amin'ny karbaona, mibontsina ny vy SS304, A2, SS314, A4
Zinky manga, manga, fotsy, galvanized, HDG, Chromate, Dacrome
Fanafarana entana fanondrana na araka ny fepetra takian'ny mpanjifa
Karazan-tsakafo sy fampiharana ny Hex Head Head Screws
savaivony:M4 hatramin'ny M16
Length:20 hatramin'ny 300mm
fampiharana:Toeram-piofanana ho an'ny indostria, Sakafo ara-tsakafo, Indostria ankapobeny, Fikarakarana ara-pahasalamana, Toe-karena goavana, Fitrandrahana solika, Fitrandrahana solika, Varotra varotra
Product Details momba ny Hex Head Wood Screws
Packaging Details:PLASTIC BAG + CARTON + WOOD FIX PALLET
TOKONY MANDOHALIKA 3-4KG SY 25 KG PER CARTON ary MALAGASY AS 900 KG PER PALLAGE.
A: Faly isika fa handefa santionan'ny fanaraha-maso. Ny ohatra azo atao dia afaka maimaim-poana, saingy mety mila mandoa ny saram-pitsarana ianao.
1) Hanome santionany araka ny sary nataonareo ho an'ny antsipiriany izahay
2) Rehefa mahazo ny santionanao ianao, dia hanome kopia ohatra ho an'ny fanamafisana.
Q: Hafiriana ny fotoana laninao?
A: Amin'ny ankapobeny dia 2-3 andro raha mbola misy ny entana. na 20-30 andro raha tsy misy ny entana, dia araka ny habeny.
A: Mampanantena izahay fa hanome vidin-javatra azo vidiana amin'ny tsara indrindra.
Q: Inona ny fepetra momba ny fandoavam-bola?
A: 30% T / T mialoha, mandanjalanja alohan'ny sambo na L / C.
Hot Tags: Hex Head Wood Screws, China, Manufacturer, Supplier, Factory, Made In China, Wholesale, Buy, Customized, On Stock, Bulk, Price, Price list, Quotation, High Quality